ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို ယူနိုက်တက်မခေါ်ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ? | FOX Sports Myanmar
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို ယူနိုက်တက်မခေါ်ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်လူဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ကင်းထောက်တွေစေလွှတ်ပြီး စောင့်ကြည့်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မခေါ်ယူခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ နည်းပြဆိုးလ်ရှားရဲ ကစားကွက်မှာ အံဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့
ယူဆခဲ့တာကြောင့်လို့ Daily Mail က ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားက သူ့အသင်းကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ ဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းကိုင်ကစားနိုင်တဲ့ ကစားသမားမျိုးကို သဘောကျနေတာဖြစ်ပြီး ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အသင်းနောက်တန်းကိုပါ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်စေတယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ အသက် (၂၄)နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်လူကို ခေါ်ယူဖို့က အသင်းအတွက်လည်း စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေက ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်စ်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ဘောလုံးပေးပို့မှုအောင်မြင်တာက ၇၅%သာ ရှိခဲ့ပြီး ဒီစွမ်းဆောင်ရည်က အသင်းအတွက် ကြိးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ယူနိုက်တက်ဘက်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပေါ့ဂ်ဘာက ၈၂.၈%ရှိနေပြီးတော့ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ ဖာနန်ဒက်စ်ထက် စွမ်းဆောင်ရည်သာလွန်တဲ့ ကစားသမားမျိုးကိုသာ ခေါ်ယူချင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ကွင်းလယ်ကစားသမားခေါ်ယူမှုမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ လာမယ့်ဈေးကွက်တွေအတွင်းမှာ ခေါ်ယူသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မာတစ်က အသက်အရွယ်ကြောင့် ခြေစွမ်းကျလာခဲ့ပြီး တော်မီနေးနဲ့ ပါရဲရားတို့က အတွေ့အကြုံနည်းသေးတာကြောင့် ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးကို မဖြစ်မနေ ခေါ်ယူသွားဖို့ ဆိုးလ်ရှားက တောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပျေါတူဂီကှငျးလယျလူဘရူနိုဖာနနျဒကျဈကို ချေါယူဖို့အတှကျ ကငျးထောကျတှစေလှေတျပွီး စောငျ့ကွညျ့မှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပမေယျ့လညျး မချေါယူခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ နညျးပွဆိုးလျရှားရဲ ကစားကှကျမှာ အံဝငျမှာမဟုတျဘူးလို့
ယူဆခဲ့တာကွောငျ့လို့ Daily Mail က ဖျောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
ဆိုးလျရှားက သူ့အသငျးကှငျးလယျပိုငျးမှာ ဘောလုံးကိုကောငျးကောငျးကိုငျကစားနိုငျတဲ့ ကစားသမားမြိုးကို သဘောကနြတောဖွဈပွီး ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေ အသငျးနောကျတနျးကိုပါ အန်တရာယျရှိလာနိုငျစတေယျလို့ ယူဆခဲ့ကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။ အသကျ (၂၄)နှဈအရှယျ ကှငျးလယျလူကို ချေါယူဖို့က အသငျးအတှကျလညျး စှနျ့စားမှုတဈခုဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ ယူနိုကျတကျတာဝနျရှိသူတှကေ ယူဆခဲ့ကွပါတယျ။
ဖာနနျဒကျဈအနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ဘောလုံးပေးပို့မှုအောငျမွငျတာက ၇၅%သာ ရှိခဲ့ပွီး ဒီစှမျးဆောငျရညျက အသငျးအတှကျ ကွိးမားတဲ့အကြိုးကြေးဇူးကို ဖွဈစမှောမဟုတျဘူးလို့လညျး ယူနိုကျတကျဘကျက ဆုံးဖွတျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပေါ့ဂျဘာက ၈၂.၈%ရှိနပွေီးတော့ ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ ကှငျးလယျပိုငျးမှာ ဖာနနျဒကျဈထကျ စှမျးဆောငျရညျသာလှနျတဲ့ ကစားသမားမြိုးကိုသာ ချေါယူခငျြခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ အပွောငျးအရှစြေ့ေးကှကျမှာ ကှငျးလယျကစားသမားချေါယူမှုမပွုလုပျနိုငျခဲ့လို့ လာမယျ့စြေးကှကျတှအေတှငျးမှာ ချေါယူသှားဖို့ ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ မာတဈက အသကျအရှယျကွောငျ့ ခွစှေမျးကလြာခဲ့ပွီး တျောမီနေးနဲ့ ပါရဲရားတို့က အတှအေ့ကွုံနညျးသေးတာကွောငျ့ ကှငျးလယျလူတဈဦးကို မဖွဈမနေ ချေါယူသှားဖို့ ဆိုးလျရှားက တောငျးဆိုထားတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
Home Football Premier League ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို ယူနိုက်တက်မခေါ်ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ?